आर्कषक तलबका साथ रोमानियाले माग्यो यति धेरै नेपाली कामदार, कति छ तलब ? - dautarimedia.com
आर्कषक तलबका साथ रोमानियाले माग्यो यति धेरै नेपाली कामदार, कति छ तलब ?
रोमानियाको एक कम्पनीले भारी सङ्ख्यामा नेपाली कामदारको माग गरेको छ । रोमानियाको Asia Recruitment Advisors SRL कम्पनीले १६० जना पुरुष र ४० महिला गरि २०० नेपाली कामदारको माग गरेको हो । कम्पनिले Room Attendant, Cleaner,Unskilled workers, cook helpers,werehouse worker,waiter,cook पदका लागी कामदारको माग गरेको हो ।
तलब खान बस्न सहित ६५ हजार देखि ७७ हजार सम्म तलब सुविधा रहेको छ । इच्छुक कामदारले Rawal International PVT.LTD को कार्यालय सिनामंगल काठमाडौंमा साउन २६ गते अन्तरवार्ता दिनु पर्ने छ ।
एजेन्सी । भारत र चीनले दुई देशका सैनिकबीच सञ्चार गर्न सिक्किमको सीमावर्ती क्षेत्रमा हटलाइन स्थापना गरेका छन् । उत्तरी सिक्किमको कोङ्ग्रा लामा रहेका भारतीय सैनिक र तिब्बतको खाम्बा जोङमा रहेका जनमुक्ति सेनाबीच कुरा गर्न हटलाइन सेवा सुरु गरिएको भारतीय सञ्चारमध्यमहरुले जनाएका छन् ।
हटलाइनको उद्घाटन गर्दै दुवै देशका स्थानीय सैनिक कमाण्डरले सन्देश आदान–प्रदान गरेका थिए । चिनियाँ जनमुक्ति सेना स्थापनाकै दिन सो हटलाइन सुरू भएको हो ।
हटलाइनबाट मित्रता र एकताको सन्देश आदान–प्रदान भएको भारतीय सेनाले जनाएको छ । करिब ३४ सय किलोमिटर सीमा निर्धारण हुन बाँकी रहेका भारत र चीनबीच गत वर्ष सीमामा तनाव बढेको थियो ।
गत वर्ष गल्वान उपत्यकामा भएको झडपमा दुवै देशका सैनिक मारिएका थिए । पछिल्लो समय दुवै देशले तनावलाई मत्थर गर्न प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
Previous: संक्रमितले भरियो टेकु अस्पताल, खतरा बढेपछि प्रशासनले जारी गर्यो यस्तो सूचना
Next: यस्ता संकेत देखिए भने हुनसक्छ ‘ब्लड क्यान्सर’, यी लक्षणलाई नगर्नुहोस् वेवास्ता